Tabobar, ku saabsan baadhista iyo Oogista danbiyada ka dhaca badda. – Somaliland Attorney General Office
Somaliland Attorney General Office > News > Uncategorized > Tabobar, ku saabsan baadhista iyo Oogista danbiyada ka dhaca badda.
23 May 2022: Tabobar, socaneyey muddo 3 maalmood ah. Ayaa uga qabsoomey Xafiiska Xeer illaalinta Guud Hotel Ambassador, kaas oo ay soo qaban qaabisey Hayada EUCAP. Waxaana lagu falanqaynayey sidii kor loogu qaadi lahaa Baadhista iyo Oogista dambiyada ka dhaca badda (Maritime Crimes) sida;
1. Kaluumeysiga sharci darada ah (Illegal Fishing)
2. Ka Ganacsiga iyo tahriibinta dadka (Human Trafficking and Smuggling in person)
3. Xeerarka Badda ee Somaliland
4. Kontarabaandada Maandooriyaha iyo Hubka (smuggling of narcotics and Arms)
Sidoo kalena waxa lagaga hadlay hababka u haboon ee ku aadan qaadista dacwadahaas, gaar ahaan nidaamka baadhis ee ay u wada shaqeynayaan ha’yadaha ay khuseyso, habka oogista ee dacwadahaas iyo go’aan ka gaadhistoodaba.
Waxaana ka soo qayb galey xubno ka socdaey;
1. Xafiiska Xeer Illaalinta;
4. Ciidanka Badda;
5. Ciidanka Socdaalka;
6. Wasaarada Gaadiidka;
7. Gudida la dagaalanka Budhcad badeed (CPC).
Waxaana lagaga hadlay noocyada kala duwan ee dambiyada ka dhaca badda.
Two days training SGBV Specialized pr...
Two days training SGBV Specialized prosecutor on SGBV Cases.
Tabobar, ku saabsan baadhista iyo Oog...
23 May 2022: Tabobar, socaneyey muddo 3 maalmood ah. Ayaa uga qabsoomey Xafiiska Xeer illaalinta Guud Hotel...
Xafiiska Xeer Illaalinta Guud ee qara...
14 April 2022: Xafiiska Xeer Illaalinta Guud ayaa soo qaban qaabiyey kula lagaga hadlayay arrimaha tacadi...
Xafiiska Xeer ilaalinta gabilay oo la...
Xafiiska Xeer ilaalinta Gabilay oo la dhagax dhigay si xafiis balaadhan oo ku filan loogu dhiso xeer ilaali...
Warbixinta dacwadaha soo galay xafiis...
Halkan ka daawo warbixinta oo dhammaystiran.
DOWNLOAD SOMALILAND CONS
Tabobar, ku saabsan baadhista iyo Oogista danbiyada ka dhaca badda.